Khin Win Kyi
☘ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသော ကော်ဖီတစ်ခွက် ☘ အာဟာရ ပြည့်ဝသောကော်ဖီတစ်ခွက် ☘ ချိုဆိမ့်မွေးသက်ကော်ဖီတစ်ခွက် ☘ သကြားအစားထိုး ဆီချိုသမားပါ သောက်လို့ရတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက် ☘ အလှအပနဲ့ အဆီကျစေတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက် ☘ ကော်လဂျင်ပါတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက် ☘ ဘယ်လိုကော်ဖီမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ ☘ ကိုယ်လိုချင်တာ ဖြစ်ချင်တာတွေအတွက် ☘ အချိန်မကုန် ငွေမကုန်ပဲ လိုတိုင်းရ☘ တ တိုင်းဖြစ်စေဖို့ အရည်အသွေးမြင့်ကော်ဖီ☘ ဖြစ်တဲ့ သဘာဝ အစွမ်းထက် Vitamins. Minerals နှင့် AntiOxidentsများ ၃၇မျိုးထိပါဝင်သော . ☕☕☕ Beaute Cafe ရဲ့ အာနိသင်နဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ် 15g ၁၀ထုတ်ပါ အထုတ်ကြီး ၁၅၀၀၀ကျပ် ၁၀ထုတ်ယူ ၁၃၅၀၀ကျပ်နှင့် Free တထုတ် #beautecafe37in1coffee #FDAapprovedProduct
🌞🌞 မနက် မနက်ဆို သူလေးကလည်းမရှိမဖြစ် Body အတွက် အာဟာရဖြည့်ရသလို ☘☘ မျက်နှာလေးအတွက် နုပျိုပြီး အစိုဓာတ်နှင့် အာဟာရ ဖြည့်တင်းဖို့ Snail က မပါမဖြစ်ပါ 🐌🐌 သူတစ်ဗူးသာဆောင်ထား အရေပြားအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး နုပျို ဝင်းပ လန်းဆန်းခြင်းကိုရနိုင်မယ်💃💃💃 50g တစ်ဘူး ၃၁၀၀၀ကျပ် #SnailWishWhiteningCream #madeinkorea #FDAapprovedProduct KWK 0925253198
Than Than Phyo
Skin တိုင်းအတွက်လိုအပ်ဆုံးNew skiin ကိုသာရွှေးချယ်သုံး
Shwe War Hlaing
အလုပ် တဖက်နဲ့ အလှပြင်ဖို့ အချိန် မရှိဘူးလား.🐌.ခရုလေး 🐌ဆောင်ထားနော်...🐌ခရုလေးသာ 🐌အနားရှိရင် 🤔စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရား ရရှိစေမှာ..🤳🤳💃💃💃 🇹🇭ထိုင်းနိူင်ငံ🇹🇭နေရာအနှံ ပို့ခ ဖရီး ပါ..🆓🆓🆓 မာမီ ခရုကြီး🐌 600ဘတ်🐌🐌 ဘေဘီ ခရုလေး 🐚100 ဘတ် 🐚🐚
ကိုယ့်ကို စိုးမိုးနိုင်လွန်းတဲ့ Ketchup Lip 💋 မတူညီတဲ့ အရောင် (၅) ရောင်လုံးက ကိုယ့်ကို စိုးမိုးနိုင်လွန်းနိုင်တာ အပိုမပြောဘူးနော် တကယ်သိချင် တကယ်ဆိုးကြည့် အရောင်ထွက်မှန်ကန်တိကျပြီး တစ်နေကုန်ခံတဲ့ Formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတယ်။ ပိုမိုလှပဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ မတူညီတဲ့ အရောင်ထွက်တွေ ရရှိစေဖို့ Ketchup Lip လေးတွေကို အရောင်စပ်ပြီး လိမ်းခြယ်ကြည့်ပါ။ 🍫 No.1 Chocolate 🍝 No.2 Pasta 🍅 No.3 Ketchup 🍡 No.4 BBQ 🍔 No.5 Burger Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက် ကျန်းမာအောင်လဲ ☕️ Beaute Cafe သောက် Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 က သာမန် Coffee များနှင့် မတူပဲ Ganoderma Extract လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ရှားပါးမှိုတစ်မျိုးနဲ့ Ginko Extract ကမ္ဘာဦးပင်၏ အဆီအနှစ်ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အရေပြား ပြဿနာများအားလုံးကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီး၍ စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းမှုများကိုလည်း ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်များကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်၍ ကျန်းမာစေပါတယ်။ အပူ၊ အအေး နှစ်မျိုးစလုံး နှစ်သက်ရာ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ☕️ Beaute Cafe Arabica Coffee 37 in 1 အထုပ်သေး ၁၀ ထုပ်ပါ အထုပ်ကြီး ၁ ထုပ် ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
Hnin Nway Nway Aung
သွားရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ Korea Made 24/7toothbalanceလေး 180g ဘူးအကိတ်ကြီးနော် ကလေးလူကြီးအရွယ်စုံသုံးလို့ရပါတယ်ရှင့် လက်လီလက်ကားနေရာအနှံ့ပို့ပေးပါတာ်ရှင့် 09402676083/cb အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်😍😘
FocusBeauty အသစ်ထွက်မဲ့ Sunscreen လေး Pre Orderတင်ထားမှစိတ်ချရမယ်နော်သဲတို့ရေ👌👌
Ma Khaing Myat Oo
မကြာမှီလာမည် နော် Newskiinsuncream
Ma San San Myint